မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: အမည် စစ်ဆေးပေးအပ်ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဆရာက ပိုက်ဆံရမှ ဟောစာတမ်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးမှာလား ။ ခု ဟာကဒီလောက်ပဲလား။ နာမည် စစ်ပေးရုံပဲလား ။ ခနဲ့သည်လား။ တမင် စော်ကားလိုသည်လား။ အမှန်ပင် နားမလည်သည် လားတော့ မသိပါ။ မေးသူအချို့ ရှိလာပါသည်။ဟောစာတမ်းရေးခြင်း ၊ ဂျီတော့မှ ဆွေးနွေးလိုသော ကိစ္စအချင်းအရာကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး ပေးခြင်း ၊ ရင်သွေးငယ်များကို အမည်ရွေးခြယ်ပေးခြင်း ၊လုပ်ငန်းနာမည် ရွေးခြယ်ပေးခြင်း ၊ စသဖြင့်တို့ အားလုံးအတွက် အခကြေးငွေဥာဏ်ပူဇော်ခ ယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေသည် မှာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဟောစာတမ်းရေးသားခြင်း ၊ နာမည်ပေးခြင်း နှစ်မျိုးကို ဥာဏ်ပူဇော်ခနှစ်သောင်းခွဲ ၊ ဂျီတော့မှ ဆွေးနွေးလိုသော ကိစ္စအချင်းအရာအတွက် ကျပ်တစ်သောင်းခွဲ သတ်မှတ်ပြီး ၊ ၀န်ဆောင်မှု ပြုပါသည်။
သို့သော် ဂျီတော့မှနေပြီး လာမေးသမျှကို ၊ တစ်ပြားတစ်ချပ်မယူပဲအချိန်ကုန်ခံ ဖြေကြားပေးတတ် သည်မှာလည်း မောင်ဖုန်း ဖြစ်သည်။ မေးလ်နှင့်ပို့ပြီး မေးသည်ကို အချိန်အားလျော်စွာ လက်လှမ်းမီ သလောက် တစ်ပြားမယူပဲ ကူညီပေးခဲ့သည်မှာလည်း မောင်ဖုန်းပင် ။ ကျွန်တော် တတ်အားသမျှ ငွေကြေးကို ရှေးရှုမထားပဲ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ကို သက်ဆိုင်သော ဗေဒင်မေးသူ စာဖတ် ပရိသတ်များ နားလည်ပေလိမ့်မည်။
ယနေ့မှန်ရာကိုဝန်ခံရလျှင် မောင်ဖုန်း မပြည့်မစုံသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။ယင်းသို့မပြည့်စုံသဖြင့် တတ်သည့် ပညာဥာဏ်စွမ်းဖြင့် ကုသိုလ်လည်းရ၀မ်းလည်းဝအောင် အသက်မွေးရပါသည်။ သို့သော်…ငွေ အပုံလိုက်ချပေးပြီး ၊ ခြေဖြင့် တို့ပြီး မောင်ဖုန်းဟောစာတမ်းရေးပေးစမ်း ဆိုလျှင်တော့ ၊ ဟောစာတမ်း မရဘဲ ဓါးဖြင့်ပဲအထိုးခံရနိုင်ကြောင်း တင်ကြို အသိပေး လိုက်ပါသည်။ လူဆိုသည်မှာ ယုံကြည်မြတ်နိုးရာကို စော်ကားခံရလျှင် သီးခံနိုင်ရန် မလွယ်ကူ ။
ငွေတပြားမှ မရလည်း မောင်ဖုန်း ဆန္ဒ နှင့် အခြေအနေပေးလျှင် အပြည့်အ၀ကူညီမည်သာ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း ယခု ကဲ့သို့ နာမည်စစ်ဆေးပေးခြင်း ၊သင့်လျော်သော နာမသဘာဝယတြာ တို့ကို လမ်းညွှန်ပေးခြင်း ပြုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။သို့သော် ဟောစာတမ်း နှင့် တော့ မတူညီနိုင်။ ဟောစာတမ်းဆိုသည်က
ဇာတာရှင် ဖြတ်သန်းနေဆဲ ဂြိုဟ်အိပ်ကာလ အကျိုးပေးကို ဟောဆိုခြင်း၊
ဇာတာရှင် လက်ရှိရောက်ဆဲ အသက်ပိုင်းကို ဆန်းစစ်ဟောဆိုခြင်း
ရောက်ဆဲအသက်ပိုင်းအတွက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် / သတိပြုရန်များ
စသည်ဖြင့် စေ့စေ့ငုငု ဖြစ်အောင် တွက်ချက်ရေးသား ပေးရသလို ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဗေဒင်မေးသူမှ အထူးပြု မေးထားသည့် အချက်များကိုလည်း တစ်ခုချင်းဆီမိမိဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ဖြေကြားပေးရပါသည်။ ကိုယ်က တန်ရာတန်ကြေး သတ်မှတ်ယူ ထားသလို လျော်ညီအောင်လည်း …အပင်ပန်းခံရပါသည်။
အဆိုပါကဲ့သို့ ဟောစာတမ်းရေးသလိုသာ တစ်ယောက်ချင်းဆီကို အခမဲ့တွက်စစ်ပေးနေရလျှင် မောင်ဖုန်းကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ .. ထောက်ပံ့ကြေးတစ်လ ဆယ်သိန်းလောက် ပေးထားမှ ဖြစ်တော့မည်။ ( ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဏာကို မျက်စောင်းချိတ်တဲ့ကောင် ..ဖမ်းကွာ ဆိုလျှင်တော့ခက်ချေမည်။ ) ယခုစာရိုက်ရင်းပင် ရယ်ချင် လာပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဂွတော့ အတော်ကျသည်ပင်။ အလွန်သီးခံတတ်သူပင် ဖြစ်သည့်တိုင် ရံဖန်ရံခါတွင် လုပ်ရကိုင်ရသည်ကို စိတ်ပျက်ရပါသည်။ နားလည်မှု အပြန်အလှန် ထားရှိကြစေလိုပါသည်။
အမှန်ကိုဝန်ခံရလျှင် မောင်ဖုန်း ထံသို့ ငွေကြေးဥာဏ်ပူဇော်ခ ပေးအပ်ပြီး ၊ဗေဒင်မေးလာသူ ၊ ဟောစာတမ်းအပ်လာသူအချို့ အပေါ်တွင်ပင် တာဝန်မကြေခြင်း ၊နှောင့်နှေးခြင်းများ ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူ တစ်နေ့တစ်နေ့ယင်းကဲ့သို့ အခကြေးငွေ မယူပဲ စေတနာဖြင့် တုန့်ပြန်ရခြင်းများ အပေါ်တွင် ကျွန်တော်သာယာ မိခြင်းကြောင့်ပင်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ထိ ချို့တဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လာသမျှ လူကိုသာ ငွေကြေးရှေးရှုပြီး ဆက်ဆံရပါက ၊ မောင်ဖုန်းဒီနေ့ ဘတ်စ်ကား တိုးစီးစရာ မလိုတော့။ အနဲဆုံး … ခြေနင်းစကြာပါရမီတက်ခ်စီလေး ကို လပေးနှင့် ငှားပြီး ကြွမြန်းတော် မူနိုင်နေတာ ကြာလောက်ပေပြီ။ ကွန်ပြူတာအစုတ်ကလေးကို ဖုန်သုတ်နေစရာမလို ၊လက်တော့ပ်အသစ်ပေါ်တိုင်း အပျင်းပြေ ၀ယ်သုံးကြည့် နိုင်လောက်ပြီ ။ ဆိုက်ဘာကိုဘတ်စ်ကား စီးပြီး အင်တာနက် ပြေးသုံးနေစရာမလို ၊ အိမ်မှာတင် အင်တာနက် ချိတ်ပြီး ၊ တစ်ဂျောက်ဂျောက်နှင့် ဗေဒင်ဟောနေနိုင်ပြီ ။
လိုရင်းကို ခရီးဆက်ပါမည်။ ယခုအမည်စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သောသဘာဝယတြာတို့ လမ်းညွှန်ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး …. စိတ်ဝင်စားသူ မေးမြန်းသူများ တွက်ထားသည်ထက်ပင် အထူး များပြားနေသည့်အတွက် ၊၀မ်းလည်း သာပါသည်။ မေးလ်ရောက်ထားသည့်အစဉ်လိုက်အတိုင်း တစ်ခုပြီး တစ်ခုမောင်ဖုန်း အချိန်ရတိုင်း တွက်စစ် ဖြေကြား ပေးနေပါသည်။ တစ်ခုပြောလိုသည်မှာ....
အချို့သော မေးသူတို့မှာ နာမည်မှာ ကျားလော မလော ခွဲမရသည့် အမည်များဖြစ်နေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် … ချိုဝေမင်း လို နာမည်မျိုးတွင်အခက်တွေ့ရပါသည်။ ကျားမ ၊ ဖိုမ ခွဲခြားရခြင်းသည် နာမည် ဟောဆိုရာတွင်လည်း အရေးပါခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် အချို့သော အင်္ဂလိပ် စာလုံးပေါင်းများ မှာ မြန်မာစာလုံးချရေးရာတွင် မပြတ်မသားဖြစ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မေးသူများအနေနှင့် မြန်မာအက္ခရာဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြားပြီး နာမည်ကို ပေးပို့ပေးရန်လိုပါသည်။
အချို့သော သူတို့ကတော့ …တစ်မိသားစုစာလော မသိ ၊ အတန်းလိုက် လူအများကြီးစာမေးထားပါသည်။ ထိုသူများကိုလည်း ဖြေပေးပါသည်။ သို့သော် …တစ်ပြိုင်ထဲတော့အားလုံးမပြီးပါ။ အများစုအတွက် ခွဲပြီး ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ..တစ်ခုချင်းဆီသာ အကြောင်းပြန် တွက်စစ်ပေးပို့ ပေးပါမည်။ စောင့်ဆိုင်းပေးရန် လိုပါမည်။
အချို့ကတော့ …. ဟောစာတမ်းမေးသလို ၊ မေးခွန်းတွေ တစ်သီကြီးနံပါတ်စဉ်ပါတပ်ပြီး မေးထားပါသည်။ ခေါင်းထဲပေါ် ၊ သိလွယ်မြင်လွယ်ပြီး သေချာနိုင်သည့် မေးခွန်းမျိုး ဆိုလျှင်တော့ ဖြေ ကြားပေး လိုက်ပါမည်။သို့သော် ဖြစ်နိုင်သမျှ အဆိုပါကဲ့သို့ မမေးစေလိုပါ။ ယခု ကဏ္ဍမှာ အမည်ကို စစ်ဆေးပေးခြင်း သာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပင်။
အချို့သော နာမည်ရှင်များကတော့ ထူးဆန်းပြီး ၊စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘ၀တွင် ဆုလာဘ်နှင့် တောက်ပသော အနာဂတ်ကံ ရှိနေသူများ (လက်ရှိတွင်မူ အဆင်မပြေသည့်ဘ၀ပိုင်ရှင်) ၊ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရန် လွယ်ကူစေသော နာမည်ပိုင်ရှင်များ ၊ တရားဘာဝနာ နှင့်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်သို့ ကိုင်းညွတ်နေသော နာမည်ပိုင်ရှင်များ ၊ အနုပညာရပ်ပိုင်းတွင် အကျိုးပြုနေသော နာမည်ရှင်များ ၊ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေ့ရပြီး ၊ ……. မောင်ဖုန်း တွက်စစ် အကြံပြု ပေးသည့်အခါ အခက်အခဲအချို့လည်း ရှိပါသည်။ ပမာအားဖြင့် ..ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မှု ပြုရန်လှုံ့ဆော် ပေးတတ်သော အမည်ပိုင်ရှင်များကို သတိပေးဟောဆိုခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ..နားလည်မှုလွဲမှားမည် (အဆိုးဟောသည် ဟူပြီး..) မကျေမလည် ဖြစ်လာမည်ကိုလည်း ထည့်တွက်ရပါသည်။ ဆိုတော့ …သိပ်တော့လွယ်ကူသည့်ကဏ္ဍ မဟုတ်ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မွေးဖွားသူများ မွေးဖွားသည့်အချိန် ကိုပါ ထည့်ပေးပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် ရာဟု မတူညီခြင်းသည် ၊ နာမည်ကို ဆန်းစစ်သည့်အခါ အလွန်အရေးပါခြင်းကြောင့်ပင်။ ဥပမာအားဖြင့် ယုယုခိုင် ဟူသော အမည်ရှင်သည် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဖြစ်ခဲ့သော် ..သူမ၏ ဘ၀တွင် မပြီးမမြောက်သော ၊ အပြီးတိုင် မအောင်မြင်သော အချင်းအရာများ ပြည့်နှက်နေမည်ကို ဖော်ပြပြီး ၊ ရာဟုသားသမီး ဖြစ်ခဲ့သော် အဆိုပါအမည်သည် … မရည်ရွယ်ထားသော ဘ၀ဖြစ်စဉ်များ နှင့် ဖြတ်သန်းရမည့် ဘ၀ခရီးကို ညွှန်ပြခြင်း ကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ဆရာက ပိုက်ဆံရမှ ဟောစာတမ်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးမှာလား ။ ခု ဟာက ဒီလောက်ပဲလား… ဆိုသူများ အတွက်ကတော့ ၊ သတ်မှတ် ထားသော ဥာဏ်ပူဇော်ခ ပေးပို့ပြီးမှ ဟောစာတမ်းရေးပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း .. ရိုးသားစွာ အသိပေးအပ် ပါသည်။ ထို့အတူပင် ကလေးနာမည်ပေးခြင်း ၊ လုပ်ငန်း နာမည်ပေးခြင်း ၊ ဂျီတော့မှ သီးသန့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်လိုခြင်းများ အတွက်လည်း သတ်မှတ် ထားသည့် ဥာဏ်ပူဇော်ကြေး ပေးပို့ပြီးမှ မေးပါ။
မောင်ဖုန်းသည် ဤပညာဖြင့် ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝစေ ရည်ရွယ်သည်။ အသက်မွေးမှု အလုပ်ဟူသည်ကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုမောင်ဖုန်း ယုံကြည်မိပါကြောင်း ။
ကိုစိုးမိုးထွန်း ( ဗေဒင်ပညာသုတေသီ )